Internet: Ampitandremo ny Zanakao | Ho An’​ny Fianakaviana
MATOAN-DAHATSORATRA Adin-tsaina Foana ve no Iainanao?
HO AN’NY FIANAKAVIANA Internet: Ampitandremo ny Zanakao
FANADINADINANA Miresaka ny Finoany Ilay Mpandidy Matihanina
Fanenjehana Mpamosavy Tany Eoropa
FANTARO IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY Fisaintsainana
Izany fa ‘Miantsoantso ny Fahendrena’! Henonao Ve?
Mifohaza! | Mey 2014
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Norvezianina Ourdou Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa
Hitanao amin’ny vaovao fa feno mpametaveta sy mpisandoka ary mpanaratsy olona ao amin’ny Internet. Matahotra àry ianao sao ho tratran’izany ny zanakao. Izy mantsy mijery Internet foana, nefa hoatran’ny tsy fantany akory hoe mety hampidi-doza ilay izy.
Azonao arovana amin’izany ny zanakao. Misy zavatra mila fantatrao anefa aloha momba ny Internet.
Efa misy Internet izao ny telefaonina. Toy izany koa ny fitaovana elektronika toy ny tablette. Afaka mijery Internet foana àry ny tanora. Tsara aloha raha atao amin’ny toerana mora tazana ny ordinatera ao an-trano, mba ho hitanao izay jeren’ny zanakao. Tadidio anefa fa tsy ho arakao intsony izay ataony, raha telefaonina no ampiasainy.
Ny zanakao ve dia tsy havelanao hitondra fiara mihitsy, satria hoe nahita fiara nidona tamin’ny tamboho ianao? Toy izany koa ny Internet. Mila mitandrina tsara fotsiny izy
Misy tanora variana mijery Internet ela loatra. Hoy ny ankizivavy iray, 19 taona: “Saika hijery e-mail vetivety fotsiny aho, nefa avy eo nilaozako nijery video ela be teo indray. Mila mifehy tena mihitsy aho.”
Mety tsy hitandrina ny tanora mampiasa Internet. Miresaka zavatra na mandefa sary tsy tokony haparitaka, ohatra, izy. Mety hisy olon-dratsy anefa hanangona an’ireny. Lasa fantany avy eo hoe aiza ilay ankizy no mipetraka na mianatra, na rahoviana no tsy misy olona ao an-trano.
Tsy hain’ny tanora sasany hoe mety hisy vokany be izay ataony. Ny zavatra ampidirina ao amin’ny Internet mantsy, dia tavela ao foana. Ahoana, ohatra, raha nisy tanora niresaka na nampiditra sary hafahafa tao? Raha mitady asa izy, ka te hahalala ny mombamomba azy ilay mpampiasa, dia afaka mikaroka ao amin’ny Internet.
Na eo aza izany rehetra izany, dia tadidio fa tsy ny Internet akory no ratsy. Mila mailo tsara fotsiny izay mampiasa azy.
Ampianaro handamina fotoana ny zanakao. Raha tiana ho matotra izy, dia mila ampianarina hoe izay zava-dehibe no atao voalohany. Zava-dehibe kokoa noho ny Internet, ohatra, ny devoara sy ny raharaha ary ny miresaka amin’ny ao an-trano. Fero ny fotoana lanin’ny zanakao amin’ny Internet, raha hitanao hoe be loatra. Asio famantaranandro mihitsy eo akaikiny raha ilaina!—Toro lalan’ny Baiboly: Filipianina 1:10.
Ampianaro izy handinika tsara an’izay hataony. Alohan’ny hanoratany na handefasany sary ao amin’ny Internet, dia asaivo mieritreritra izy hoe: Mety hahatezitra olona ve io? Sao dia halaza ratsy aho? Ho menatra ve aho raha hitan’i Dada sy Neny na olon-dehibe hafa io? Inona no hoeritreretiny momba ahy? Raha olon-kafa no nampiditra an’io, dia ahoana no hiheverako azy?—Toro lalan’ny Baiboly: Ohabolana 10:23.
Ampianaro izy hahay hanavaka ny tsara sy ratsy. Ianao aloha tsy hahavita hanara-maso azy foana. Tsy ny hibaiko azy koa no tadiavinao, fa ny hampianatra azy hampiasa ny sainy mba hahay “hanavaka ny tsara sy ny ratsy.” (Hebreo 5:14) Ampio àry izy hampiasa ny feon’ny fieritreretany, fa tsy hatahotra ny ho bedy fotsiny. Tokony ho tsapany hoe tsy mety ilay izy, fa tsy hoe tsy avelanao hatao fotsiny. Anontanio, ohatra, izy hoe te ho tsara laza ve izy? Olona hoatran’ny ahoana no tiany hahafantarana azy? Ampianaro izy hanao safidy tsara, na dia tsy eo imasonao aza.—Toro lalan’ny Baiboly: Ohabolana 3:21.
“Tena mahay ny ankizy raha resaka teknolojia, fa ny ray aman-dreny no tena mahay raha resaka fiainana.”
Tsy hoe mahay mitondra fiara fotsiny ny mpamily mahay, fa tsara toetra sy malina. Hoatr’izany koa amin’ny Internet. Mila torohevitra avy aminao àry ny zanakao. Hoy i Parry Aftab, mpikaroka: “Tena mahay ny ankizy raha resaka teknolojia, fa ny ray aman-dreny no tena mahay raha resaka fiainana.”
‘Fantaro tsara izay zava-dehibe kokoa.’—Filipianina 1:10.
“Amin’ny tsisy saina dia toy ny kilalao ny fitondran-tena baranahiny, fa natao ho an’ny olona mahay manavaka kosa ny fahendrena.”—Ohabolana 10:23.
“Arovy ny fahendrena sy ny fahaiza-misaina.”—Ohabolana 3:21.
“Mila manana an’ireto toetra ireto ny zanakao, vao tokony hampiasa Internet: Tsara fanahy, mahay mifehy tena, mandefitra, ary tsy manavakavaka. Hahita olana izy raha tsy manana an’ireo.”—Omeo Fitiavana sy Fatokisana Izy mba Hianatra Hahaleo Tena (anglisy), nosoratan’i Kenneth Ginsburg sy Susan FitzGerald.
Mey 2014 | Adin-tsaina Foana ve no Iainanao?
MIFOHAZA! Mey 2014 | Adin-tsaina Foana ve no Iainanao?